‘ढोरपाटन महोत्सव -२०७५, बुर्तिबाङ’ किन ? – ebaglung.com
‘ढोरपाटन महोत्सव -२०७५, बुर्तिबाङ’ किन ?
२०७४ चैत्र १९, सोमबार ०५:५२	Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ इकाई बुर्तिबाङको आयोजनामा यही बैशाख १, २०७५मा महोत्सव आयोजना गरेको छ । संभवत बागलुङ पश्चिमको बुर्तिबाङ बजारमा यसखालको महोत्सव पहिलो पटक आयोजना गरिदै छ । महोत्सव सञ्चालनका कुराहरु यस अघि पनि कैयौं पटक चर्चा र बहशमा नआएका होईनन् । तर समय परिवेश, आवश्यक तयारी, आयोजक संस्था, सहयोगीहरु र यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने सबै चिजहरुले सार्थकता नदिएकै कारण यस पटक जेनतेन यस समयमा सञ्चालनको पहिलो अभ्यास गरिएको हो ।
महोत्सव चलाउनु पर्दछ भन्ने कुरा उद्योग बाणिज्य संघको जिल्ला समिति, जिल्ला विकास समिति, पर्यटन प्रवद्र्धक संघ संस्थाहरुबाट नआएका होईनन् । सजिलो गरि दिइने भनेको वा भनौ विना शुल्क प्राप्त गर्ने भनेको सल्लाह नै रहेछ । तर त्यसको व्यवस्थापन र सम्पन्न गर्न अन्ततः आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थिति र क्रियाशील सामाजिक संस्थाको खाँचो अवश्य सजिला पक्ष होईनन् । यो महोत्सव सञ्चालन पूर्व जुनखालका सल्लाह सुझाव दिनेहरु थिए वा हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सकरात्मक मान्छेहरु थिए आज उनीहरुको वास्तविक भूमिका प्रति मेरो मन दुखेको छ । त्यसकारण पनि लेख्दै छु । यथार्थता नजान्ने र बनुझ्ने सायद लाग्छ दुनियाँमा कोही छ भने त्यो उसको स्वार्थको पक्षपाति नै होला मेरो सिधा बुझाई हो । यस विषयमा म कहिं कतै चुक्न र झुक्न सक्दिन । सत्य सत्य नै हुन्छ । कारण अनेकन हुन सक्छन् । त्यस मध्येको पहिलो कारण हो हामीमा कति हदसम्मको सामाजिक सकरात्मकता र जागरणको खडेरी रहेछ भन्ने आज तपाई हामी सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिबाट र त्यहाँ गरिएका खेदजनक आलोचना प्रति ईंगित गर्न चाहन्छु । जो जस्लाई मैले सामाजिक व्यक्तित्वका रुपमा चिन्दथे , सम्मान गर्दथे, आदर सत्कार गर्दथे त्यो वास्तविकता आज मैले उहाँहरुमा पटक्कै पाईन । मैले सबै जनालाई वा यसका आलोचक कसैप्रति कुनै मनसायले ईगित गर्न चाहन्न । जो जस्ले जे जसरी बुझ्नु भएको छ जे जति तर्कहरु दिनुभएको छ त्यस प्रति यहाँहरुलाई अपार सम्मान प्रकट गर्दछु । तर कुनै विषय वस्तु वा अवस्थाको कारण जान्दा जान्दै पनि एकहोरो अनर्गल निचतहसम्मको गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति र्मैले सामाजिक व्यक्तित्वका दर्जाबाट चिनेजानेकाहरुबाट आइरहेको छ । तपाइहरुको चिन्तन प्रति मेरो बिल्कुल असहमति छ ।
बुर्तिबाङमा आयोजना गरिन थालेको महोत्सका सन्दर्भमा म धेरै पटकको छलफल र वहसमा संलग्न छु । मेरा तर्फबाट यो महोत्सवलाई बुर्तिबाङ महोत्सव प्रस्तावको कुरा उठाएकै हुँ आज पनि दावाका साथ भन्न सक्छु त्यस समयमा छलफलमा बसेका अग्रजहरुलाई अझै पनि याद छ । त्यसोमात्र नभई छलफलकै क्रममा ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपाली, तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा, निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेल, बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजा सहितको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा, उपाध्यक्ष निमलाल पाण्डे लगायतका पदाधिकारी ढालेन्द्र छन्त्याल, ऋतुवर्ण पौडेल सल्लाहकार सदस्य सहितको संयुक्त अन्तरक्रिया र बैठकमा समेत नगरपालिका रहेको स्थानमा आयोजना गरिने महोत्सव नामसँग ढोरपाटन जोड्नु पर्दछ भन्ने आएपछि सकरात्मक हिसावले हामीले नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र पर्यटकीय हिसावले समेत प्रचार प्रसारको खाँचो रहेको ढोरपाटन लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका विभिन्न अन्य पर्यटकीय स्थलहरु धु्री डाँडाको परिचय, स्थान विषेशको फोटो, मठ, मन्दिर, कला संस्कृतिलाई महोत्सवमा एकैसाथ पर्दशन हुनुपर्ने छलफल र बहशबाट निर्णय पनि भयो । नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरका कला, संस्कृति, पर्यटन प्रचार र उद्योग व्यापारको पर्वद्धनलाई मध्यनजर राख्दै जिल्लाका स्थानीय निकायसँग समन्वय गरि विक्रम सम्वत २०७५ अर्थात नेपालको नयाँ वर्ष बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म बृहत् ‘ढोरपाटन महोत्सव २०७५— बुर्तिबाङ’को आयोजना गरी पश्चिम बागलुङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आफ्नो पहिचान निर्माणमा महत्व राख्ने ध्येय उक्त बैठकको थियो । विभिन्न चरणमा स्थानीय वजारका व्यवसायीहरुको व्यापक सहभागीतामा छलफल अन्तरक्रियाबाट महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।
मैले आज सामाजिक सञ्जालमा दख्ने गरेका महोत्सव सन्दर्भका विभिन्न टीका टिप्पणीमा आयोजक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ प्रति र त्यसका पदाधिकारीहरु प्रति लक्षित गरि लेखिएका अपशब्दहरु करिव दुई हप्तादेखि अवलोकन गरिरहेको छु । जहाँ बुर्तिबाङ बजारमा व्यवसाय गरेर वसेका तमाम व्यवसायीहरुको मन कुँडिने गरि यसरी गाली गरिएको छ कि खाते, पाते, भाते, स्वार्थी, निच, बेइमान, भ्रष्ट, कुकुर, डाँका, फटाहा, चोर, दलाल जस्ता निकृष्ट शब्दहरु प्रकट भएका छन् । त्यसका पछि कारण, महोत्सवको नाममा ढोरपाटन किन जोडियो भन्ने मुख्य तर्क रहेको छ भने ढोरपाटन शब्द जोडिएपछि यो महोत्सव ढोरपाटन उपत्यकामा भए राम्रो हुथ्यो भन्ने नै आशय छ । यहाँहरुको आशय र भनाई वा बुझाई प्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन । कारण मैले माथि नै स्पष्ट पारेको छु । यो महोत्सव उद्योग वाणिज्य संघले बुर्तिबाङलाई नै केन्द्र बनाएर आयोजना गर्ने संघको कार्ययोजना हो । यसमा कही कसैले अन्यथा नलिए हुन्छ । कुरा रह्यो नाममा किन ढोरपाटन जोडियो भन्नेमा, स्थानीय निकाय भनौ वा स्थानीय सरकार जो आफै ढोरपाटन नगरपालिका नाममा छ । बुर्तिबाङ केन्द्र हु्ने गरि ढोरपाटन नगरपालिका नाममा कुनै पनि समय कोही कसैले यसखालको बहश गरेका मैले पाईन । बुर्तिबाङ नगरपालिका हुनुपर्ने रहेछ किन ढोरपाटन नगरपालिका भयो भनेर आज महोत्सवको नाम जोडिदा केहीले तर्क गरेका छन् त्यो पनि आधिकारिक होईन सामाजिक सञ्जालमा मात्र ।
महोत्सव सञ्चालनका निर्णय बखत हामीलाई पनि सहज लागेको थियो । बुर्तिबाङ भन्नु भन्दा पालिकाको नाम नै जोडेर जानुपर्दछ भन्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको सुझाव एक हिसावले सकरात्मक पनि हो । उहाँहरुको सहयोग र सक्रियतामै त्यही स्थानको व्यापार मेला, त्यसमा पनि निसीखोला, तमानखोला र बडीगाडले समेत स्वीकार गरेको नाम ढोरपाटन महोत्सव २०७५, बुर्तिबाङ भन्नेमा यतिठूलो अन्यायपूर्ण शब्दहरुले अपमानजनक विचारहरु हाम्रा सामाजिक अभियन्ताहरुमा ओकलिएलान भन्ने सोंचेका पनि थिएनौं । यद्यपि ढोरपाटन नामलाई बुर्तिबाङका व्यापारीले यत्तिकै टिपेर राखेको पनि होईन । देशका विभिन्न स्थानमा हेर्नेहो भने हामी देख्छौं, यातायात व्यवसायीदेखि, होटल, ट्राभल, सञ्चार संस्थान, अस्पताल मेडिकल देखि सामान्य चियापसलहरु ढोरपाटन नामबाट देख्दा हामीलाई अत्यन्त आफ्नो ठाउँको प्रचार भएको अपनत्व महसूस हुन्थ्यो । खुसी लाग्थ्यो । कहाँका मान्छे होलान त्यसका सञ्चालक, घर कता होला भनेर चिनाजानी गर्न मन लाग्थ्यो । तर त्यो शब्दसँग जोडिएका निचसम्मका अपमानित शब्दहरुले ढोरपाटनका नामबाट सञ्चालन गरिएको विभिन्न पेशा व्यवसायीहरुलाई समेत लज्जित अपमानित महसूस भइरहेको छ । जहाँ ढोरपाटनको नामबाट कमाइखाने र नाम बेचेर खाने भनेर आलोचना गरिएको छ । यस विषयमा मैले केही भन्नु छैन । नाम बेचेर खाएकाहरु जति धनी छन त्यस ठाउँमा रहेका हामी त कति धनी हौला ? प्रश्न उत्तर गरेर समय किन बर्बाद गरौं भन्ने सवाल म आफूले मैमाथि गरेको छु ।
मेरो खास प्रश्न यो हो कि ? बुर्तिबाङमा व्यवसाय गरेर वसेका व्यवासायीहरु प्रति जुन प्रकारको आक्षेप वा आरोप लगाइएको छ त्यो निराधार छ । उहाँहरु गाली गलौजमा भनिए जस्ता चोर, डाँका फटाहा, दलाल, लुटेरा, बेइमानी, कुकुर खाते पाते भाते कोही होईन । त्यही समाजका पात्रहरु हुनुहुन्छ । नामलाई जोडे्र ढोरपाटन बेच्न बसेका पनि उहाँहरु हुनुहुन्न । जसरी यस सन्दर्भमा भनिएको छ । बरु त्यस ठाउँको प्रवद्र्धन, विकास र सामाजिक रुपान्तरण अभियन्ताहरु हुनुहुन्छ । यो मैले प्रमाण सहित पेश गर्न सक्छु । हाम्रा आसपासमा विभिन्न पर्वहरुमा यस्ता मेलाहरु वर्र्षै यता लाग्दै आएका छन् । निसी भूजी तमान, बडीगाड क्षेत्रमा लाग्ने मेलामा यहाँका व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सहयोग छ । कहीँ प्रायोजक बन्नुभएको छ कही सहयोगी बन्नुभएको छ । त्यत्तिमात्र होईन ढोरपाटनमा यस अघि लगाइएको दुइ—दुई पटकको महोत्सवमा बुर्तिबाङ बजारमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र संघ संस्थाले आफै ध्वजापतका टाँगेर, व्यानर लेखेर टाँगेको, ढोरपाटन पुग्ने पाहुनाहरुलाई स्वागतव्दार निर्माण गरेर सम्मान प्रकट गरेको सबैका आँखाले देखेकै हुन् । पश्चिम क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाहहरु दैवी प्रकोप आगलागि वाढी पहिरोमा परेकालाई सहजै सहयोग गरिरहनुभएको छ । हिजो भुकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरु, वाढी पहिरोमा परि अन्नपात नहुनेदेखि लत्ता कपडा नहुनेहरु, आगलागि पीडित, सिकिस्त विरामी परहेकाहरुलाई खुल्ला ह्दयदेखि नै सहयोग सदभाव राख्ने त्यहाँका व्यवासीहरुको महत्वपूर्ण सहयोग छ । आज उनीहरुले आयोजना गरेको एउटा पर्वलाई लक्षित गरि जे जस्ता नकरात्मक अफवाहरु जुनसुकै मानेमा फैलाइएको छ, पक्कै पनि यसले स्थानीय सामाजिक अभियानमा यति राम्रो सद्भाव प्रदर्शन गर्दैन । गलत तर्कसँग मेरो कुनै शब्द सापटी समेत छैन । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखैमा काँडै संसार, सबै व्यवसायीहरु आफूलाई संयमित बनाएर नकरात्मकतालाई छाडदै सकरात्मकता अंगालेर आफ्नो पर्व सफल पार्नुहुने छ । आज ढोरपाटन नगरपालकाको वडा नं. १ मा त्यसमा पनि पहिलो पटक आयोजना गरिएको व्यसायीहरुको प्रयास प्रति जे जति नकरात्मक टिप्पणीहरु भएका छन् । त्यसप्रति व्यवसायीक मित्रहरुको क्षमापन बाहेक अरु कुनै बुद्धिमता पनि मैले देखेको छैन । हामी सकरात्मक भएको भए त्यो ठाउँ आज त्यस्तै अवस्थामा रहने पनि थिएन जस्तो महसुस हुन्छ । जव हामी आफैमा नकरात्मक चिन्तनहरु जिउँदो जाग्दो जीवनमा रही रहन्छन भने अवश्य हामीलाई त्यो विचार चिन्तनले उतै डोर्याउँछ । थाहा छ जव, साथ नै मिल्दैन भने सफलता आकासबाट झर्दैन । नकरात्मक विचार प्रभाव यदी हाम्रो जीवनमा आइलाग्यो भने हाम्रा आफ्नै भन्ने साथीले साथ दिंदैनन, अफ्ठेरोमा छिमेकीले पैंचो दिंदैनन्, आफन्तहरु समेत साथमा बस्न मान्दैनन् । हाम्रो आफ्नो समाजले पनि न्याय दिंदैन, सामाजिक काम गरे भनेर कल्याणकारी सम्मान पाइने त ठाउँनै छैन, यस्तो समाजले मृत्युपछिका मलामीहरु समेत श्रद्धाकारी पठाउँदैन ।
मनमा लागेका खुल्दुलीहरु शब्दमा लेंखे किन कि बुर्तिबाङमा आयोजना गरिएको महोत्सव केवल यहाँहरुले बुझेजस्तो ढोरपाटन महोत्सव पनि होईन र बुझन खोजेको बुर्तिबाङ महोत्सव पनि भइदिएन । यो महोत्सव ढोरपाटन महोत्सव २०७५— बुर्तिबाङ’ हो । यसलाई सही तरीकाले बुझने क्षमता भएका तपाईहरुलाई सम्मान प्रकट गर्दछु । नबुझेर पनि धेरै मान्छेहरु मर्दछन् । त्यहाँ बुझाउने अवसर समेत पाइदैन । जति सकरात्म मनहरु छन् तपाइहरुको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु । अन्य प्रति जे सुकै भन्नुस् न कुनै साइनो छ, न कुनै सम्बन्ध छ जो सन्दर्भ सम्मलाई । आफ्नो ठाउँलाई मायाँ गरौं, जुटेर एकताभावले एक अर्का प्रति सम्मान प्रकट गरौं ता कि भोलि तपाइ पनि त्यही समाजको सम्मान खोज्ने व्यक्तित्व हो । पहिलो पटक बुर्तिबाङमा आयोजना गरिएको महोत्सव भव्य सफल पारौं, सक्रिय सहभागी होऔं, बैशाख १ देखि ७ गतेसँम्म आयोजना गरिएको, महोत्सवमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वबाट उदघाटन हुँदैछ । हामीले चिने जानेका सबै व्यक्तित्वहरुलाई निमन्त्रणा गरेका छौं ।
आयोृजना गरिएका खेलकुद कार्यक्रम, साँस्कृतिक कार्यक्रम, प्रर्दशनी लगायतका सबै प्रका्रका कार्यक्रममा यहाँहरुको गरि।मामय उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दछु । हाम्रा स्थानीय चारवटै गाउँपालिकाका लगायत जिल्लावासीहरु, सबै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संरचना अनुसारका जनप्रतिनिाधिहरु, सामाजिक व्यक्तित्वहरु, राजनैतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी मित्रहरु, कलाकारहरु देश तथा विदेशमा रहेर पनि आफ्नो गाउँ ठाउँलाई मायाँ गर्ने सबै प्रति सहयोग सदाचार र सद्भावको कामना गर्दछु । अस्तु,
लेखक, बागलुङ उद्येगवाणिज्य संघ बुर्तिवाङ ईकाईका महासचिव हुन् ।
बचत गर्ने बारेमा थाहा नभएकाले काम गर्ने, पैसा कमाउने र खर्च गरी सिध्याउने गरेका छौं – श्रमीक
काँग्रेसले जितेका बानपाका १३ र १४ नं वडाहरुमा जथाभावी मोटरबाटो खन्दा जनताको उठ्ठिबास !